Taariikhda, Hawlgalka&Himilooyinka - Somaliland Chamber of Commerce, Industry and Agriculture(Somalia)
Rugta Ganacsiga, Wershadaha iyo Beeraha ee Somaliland waxa la aasaasay 25kii October 1993, waxaanay ku disan tahay sharciga guud ee lambar 35 oo tilmaamaya inay tahay hay’ad gaar ahaaneed oo ay leeyihiin hantilayda gaar ahaaneed.
Waqtigan Md Xassan Cabdi Cawad ayaa Guddoomiye ka ah, Md Cabdillaahi Diiriye Jaamac waa Xoghaye Guud.
U hawlgalka curinta xidhiidho ganacsi oo cusub iyo iskaashiba oo Somaliland ay la yeelato Adduun-weynaha, kana dhigto dalka suuq ganacsi oo caalami ah.
U fidinta tilmaamo iyo gacan-qabasho meheradaha ganacsi oo dhan iyo inay ganacsatada wax-dhoofsha iyo kuwa wax-soo-dejiyaba si buuxda ula socodsiiso macluumaadka suuqyada gudaha iyo kuwa caalamiga ahba, tababarro iyo dhacdooyinka ganacsi iyo wixii fursado ahba.
Rugta Ganacsiga Somaliland waa hay’ad ay leeyihiin ganacsatadu oo gaar ahaaneed, kana madaxbannaan dowladda. Waana hay’ad ay xubin ka noqon karaan cid kasta oo ku jirta hawlo ganacsi. Rugtu waxay soo dhoweynaysaa xubinnimada ganacsatada gudaha iyo maal-geliyeyaasha shisheeye. Codsiga xubinnimada rugta waxa toos loogu gudbinyaa Xoghayaha Guud ee Rugta, iyadoo codsadaha ay waajib ku tahay inuu u hoggaansamo sharciga Rugta.
Xubnaha Rugtu waxay marka hore bixiyaan kharashka diiwaangelinta, iyagoo ka bacdina bixiya dhigaal sannadeed, oo ay heerkooda go’aamiyaan Guddiga Maamulka Rugta, lana beddelo markii loo baahdo